Waxaan rabaa inaan tababaro, laakiin xagee laga bilaabayaa?
Posted by Tranquillus | Feb 2, 2021 | Shabakada
Ma rabtaa inaad bilowdo koorsada tababarka, laakiin ma garanaysid sida loo sameeyo? Iyadoo mashaariicda xirfadeed ay kala duwan yihiin (dib u tabobar, cusboonaysiinta iyo helitaanka xirfadaha, iwm), su'aalaha qaarkood waa in la waydiiyaa ka hor inta aan tababarka la bilaabin. Waa kuwan talooyinkeenna si aan kuugu bilowno cagta midig.
Qaado waqti aad ku fikirto
Fikradda dib-u-tababarista ayaa madaxaaga soo martay dhowr bilood? Ma jeceshahay shaqadaada, laakiin waxaad rabtaa mas'uuliyado kale? Dhawaan shaqada laga joojiyay, ma waxaad dooneysaa inaad xarig cusub ku darto qaansadaada? Faahfaahin kasta iyo xaalad kastaaba waa mid gaar ah. Si kastaba ha noqotee, kahor intaadan bilaabin nidaamka tababarka, waxaa lagama maarmaan ah inaad waqti siiso milicsiga si aad uxisaabto xirfadahaaga iyo rabitaankaaga, laakiin sidoo kale inaad fiiriso suuqa shaqada.iyo liistada qaybaha shaqaalaysiinta. Markaa waxaad xor u tahay inaad naftaada u hagto qiimeynta xirfadaha ama Golaha Horumarinta Xirfadaha (CEP). Ama, haddii aad shaqo doon tahay, qaado Xirfadaha Xirfadaha iyo Qiimaynta Kartida (ECCP) ama iska qor aqoon isweydaarsiga ...
Waxaan rabaa inaan tababaro, laakiin xagee laga bilaabayaa? July 10th, 2021Tranquillus
READ Hawlgabka horumarka leh ayaa la kordhiyey shaqaalaha maalin go'an
horeHab maamuuska qaranka: kala fogeynta cusub, maaskaro qeybta 1aad iyo hawo qaadasho saacad kasta
socdaMeeshee Francophonie ka degtaa adduunka sanadka 2021?
Dib u laabashadayda xirfadeed waxay timid waqtigii saxda ahaa waxayna bilawday shaqo abuur lama filaan ah. "
MOOC MMS: Xirfaddayda Daryeelka Caafimaadka
Sida Loo Sameeyo Aragti 1aad Wanaagsan - 30 ′ Hagaha